Heiken Ashi: hal istiraatiijiyad tilmaame ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Heiken Ashi: hal istiraatiijiyad tilmaame ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Falanqaynta laambadda, in kasta oo ay taariikh dheer tahay, waxay sii wadaa inay noqoto mid ka mid ah hababka ugu faa'iidada badan ee sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaar kasta oo maaliyadeed laga bilaabo lamaanaha lacagta illaa saamiyada iyo mustaqbalka. Sida farsamo kasta, waxay leedahay, marka lagu daro faa'iidooyinka iyo qasaaraha, taas oo macnaheedu yahay fursado horumarineed. Mid ka mid ah wax ka beddelka ugu guuleystay waa shumacyada Heiken Ashi.
Mid kasta oo ka mid ah M1-M15. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Sida shumacyada «cusub» u shaqeeyaan
Dhibaatada ugu weyn ee dhammaan xulashooyinka falanqaynta suuqa waa shaandheynta dhaqdhaqaaqyada qiimaha aan kala sooca lahayn iyo kuwa yaryar ee ka dhigaya wax adag in laga ganacsado isbeddellada. Si looga saaro suuqa "sawaxanka", jilicsanaanta ama iskucelcelinta xogta taariikhiga ah ayaa la isticmaalay, taas oo siinaysa sawir cad oo cad. Heiken Ashi algorithm wuxuu u shaqeeyaa si isku mid ah - waxaan dhihi karnaa waxaan wax ka qabaneynaa "celceliska shumaca dhaqaaq".
Waxay ku jirtaa aasaasiga aasaasiga ah ee dhammaan meheradaha ganacsiga . In kasta oo isku ekaanshaha dibadda ee laambadaha "caadiga ah", haddana waxaa jira kala duwanaan weyn oo ku saabsan jaantusyada. Aynu eegno isla mudadaas si faahfaahsan:
Sida aad u aragto, heerarka qiimaha shumacyadu way ka duwan yihiin, in kasta oo qaabkoodu guud ahaanba isku soo beegmayo. Si qeexan uma qeexi doonno algorithm-ka xisaabinta; waxaa laga heli karaa internetka. Ganacsi faa'iido leh, kaliya hal muuji oo tilmaame ah ayaa ku filan: Haddii kaliya hal qiime loo isticmaalo in lagu dhiso laambad caadi ah (Furan / Xir / Sare / Hoose), markaa Heiken Ashi ayaa u adeegsanaya xisaabinta dheeraad ah.
Natiijadu waxay noqoneysaa jilcitaan dheeri ah, taas oo macnaheedu yahay in dib u dhaca uu kordho. Isla mar ahaantaana, tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in lagu isticmaalo ikhtiyaarrada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh hantida leh isbeddel sarreeya, sida GBB / JPY ama EUR / JPY iskutallaabta laba-iyadoo la adeegsanayo "synthetic" Ashi shumacyo, waad kala shaandheyn kartaa inta badan jebinta beenta iyo meelaha laga soo galo.
Dhameystirka aragtida iyo u gudubka calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee dhabta ah .
Waxaan u adeegsan doonnaa calaamadaha ganacsiga ugu fudud uguna muuqaalka badan - isbeddelka midabka jaantuska markii isbeddelka la rogay. Si aad u furto ikhtiyaarka, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso laba shuruudood:
Waa inuu jiraa ugu yaraan seddex shumac oo isku midab iyo jaho ah intaan suuqa la galin;
Haddii meydadka shumaca ay sii kordhayaan, tani waxay muujineysaa horumar isbeddel ah. Iyadoo la raacayo, markii isbeddelku dhammaado, way yaraanayaan, hooskuna wuu sii kordhayaa;
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan goobaha ganacsiga ee caanka ah !
Waad u adeegsan kartaa Heiken Ashi labada nooc ee lacagta ah, way fiicantahay inaad ku ekaato kuwa waaweyn (euro, dollar, yen), oo aadan ku qancin kuwa qalaad (Mexico peso, Indian rupee iyo kuwa kale). In kasta oo lammaanayaashani muujinayaan isbeddello xooggan oo aad lacag ka samayn karto, waa inaadan ku kadsoomin jadwalka iyo "shumacyo dhaadheer". Xaqiiq ahaan, waxaan leenahay xisaab hooseeya iyo ku tiirsanaan adag oo ku saabsan arrimaha aasaasiga ah. Xaaladahan oo kale, xeeladaha badankood iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah uma shaqeeyaan!
Ka shaqeynta qaababka garaafka ayaa dhibaato ku ah ganacsatada: ganacsi ka fur, tusaale ahaan baarka soo socda ka dib markii ay jabeen xariijinta iska caabinta "saddexagalka". Ama sug ilaa seddex shumac Heiken Ashi ay isku midab yihiin?
Xaaladdan oo kale, way fiican tahay in lagu soo galo suuqa iyada oo la adeegsanayo calaamado qaab ah. Falanqaynta garaafka ayaa si guud u aragta xaalada suuqa, si hufan ayey uga jawaabaysaa isbedelkeeda. Waxaad lumin kartaa faa iidooyin badan adoo sugaya shumaca inuu midabkiisa badalo.
Ganacsatada khibrada leh ee waqtiyada ka sareeya waxay furi karaan xirfado iyagoo adeegsanaya kaliya tilmaame si loola socdo "garaaca suuqa", laakiin qaabkani wuxuu ku haboon yahay suuqa saamiyada, halkaasoo astaamaha ay ka deggan yihiin. Laakiin suuqa firfircoon ee Forex, had iyo jeer waxaa jira khatar dib-u-noqosho deg deg ah xitaa isbeddel muddo-dheer ah, markaa tixgeli xogta qalabka kale ee farsamada iyo calaamadaha ganacsiga nool ;
Tilmaamuhu wuxuu muujinayaa dhamaadka saxitaanka maxalliga ah ama dib u celinta wanaagsan. Markay u dhowdahay dib u bilaabashada isbeddelka, ayaa sii weynaanaya hooska shumaca, xitaa haddii jirku ku sii jiro isla heerka. Waxaa lagugula talinayaa in la xiro macaashka / luminta hadda jirta marka la beddelayo midabka jaantuska;
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo kaliya ma aha isbeddelka qalabka ganacsiga guud ahaan laakiin sidoo kale qiimaha celceliska kulamada ganacsiga Forex. Tusaale ahaan, lammaanaha leh Euro waa kuwa ugu firfircoon kal-fadhiga Yurub, taas oo macnaheedu yahay in shaxanka uu yahay midka ugu wargelinta badan. Dhinaca Aasiya, mugyadu si aad ah ayey u dhacayaan oo calaamadaha binary ee otomaatiga ah ayaa joojiya shaqada.
Aan soo koobno . Heiken Ashi waa mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu wanaagsan ee dib u dhaca dib u dhaca ma aha dib u dhac weyn. Furitaanka daahitaanka 1-2 shumac waxay kuu ogolaaneysaa inaad gasho calaamad aad u xoog badan oo aad u xirto si sax ah dhamaadka isbeddelka.
Kama jawaabaan isbeddelada suuqa kala-sooca, waxay si fiican u muujinayaan dhaqdhaqaaqyo dhexdhexaad ah iyo kuwa muddo-dheer ah, laakiin waxaa fiican in la furo jagooyinka oo keliya ka dib marka la xaqiijiyo dheeraad ah ee calaamadaha binary , maahan inta lagu jiro xilliga fidsan.